Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Xiriirka Kubada Cagta Jowhar Oo Si Adag Loo Dhaliilay.
Xiriirka Kubada Cagta Jowhar Oo Si Adag Loo Dhaliilay.
Iyaga oo ka qeyb galayay Barnamijka Cayaaraha Soomaalida ee idaacada asal aya waxa ay si wada jir ah walaac daran uga muujiyen Go,aan ay dhawan xiriirka kubada cagta degmada jowhar dul dhigen dhamaan kooxaha ka dhisan degmada jowhar kaasi oo ahaa in ay bixiyan lacag dhan $573 dollar oo ah lacagta mareekanka taasi oo udhiganta 14 milyan iyo 38 kun oo shilinka soomaaliga ah.
Taasi oo uu xiriirka ukala dhigay kooxaha A $243 dollar halka kooxaha sarie biida ay bixinayaan 330 dollar
Xasan shekh ibraahim oo ah gudomiyaha koxda kubada cagta ee Banaadir sports clup ayaa waxaa uu shegay in aanay heli Karin lacagta intaasi la eg taasina bedelkeda ay qaadanayaan in ay isaga haraan tartamada cayaaraha e degmada jowhar.
Dhinaca kale Mahdi Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha Naadiga kubada Cagta e midnimo ayaa isagana dhankisa dhalilay lacagaha ay xirirka kubada cagta degmada jowhar duldhigen kooxaha ka dhisan magaalada jowhar, mahdi waxu sheegay in ay kala direen kooxda midnimo sabab la xiriirta qarashka la duldhigay.
Marka laga yimado Dhaliisha iyo rajo xumida kooxaha heerka 1 aad iyo kuwa heerka labaad e degmada jowhar ayaa waxa sido kale ka jawaab celiyay hadaladood gudoomiyaha xiriirka kubada cagta ee degmada jowhar guuleed kaasi oo sheegay in kooxaha ay ku qasban yihin bixinta lacagtani.
Maalinnimadii sabtida ee ay taariikhdu ay ku beegneed 01 bisha December 2018 ayaa wixi mudadaasi ka dambeyay guux saameyay kooxaha ka dhisan jowhar uu soo ifbaxay malintaas oo gabi ahaan loo yeeray kooxaha ka dhisan degmada jowhar.
Si kastaba ma cada halka ay ku idlaanayaan muranka sii xoogeysanaya e ka jira koxaha degmada jowhar iyo xiriirka kubada cagta.